Posted by: Zakariya in Dhanbaallada October 4, 2015	0 586 Views
–Dhoolla-caddeyntaada gudaheeda, waxaan ka dhex arkaa wax ka qurux badan xidigaha. Sida qofka biyaha ku jira uu u jecelyahay hawada ayaan adigana kuu jeclahay. Way i burburinaysaa inaan wax-yar kaa heysto. Adiga oo dhan ayaan ku jeclahay.
–Kuuma jeclaanin si ka badan sida aan hadda kuu jeclaaday. Kuumana jeclaan doono sida ka liidata sida aan hadda kuu jeclahay. Mararka qaar ma arki karo naftayda kolka aan adiga kula joogo. Kaliya waxaan arkaa adiga. Haa adiga oo kaliya.
–Si filan waa’ ah ayaan kuu jeclaaday. Mana filayo inaan si fudud kugu hilmaami doono. Waan ku jeclahay. Waxaan ogaaday in kolkii labaad ee aan kulannay inay jirto wax adiga kugu saabsan oo aan u baahanahay. Markaan dib kuu jalleecayna, ma ahayn wax adiga kugu saabsan. Adiga haa adiga unbay ahayd.
Inaad wax jeclaato waa arrin. Inaad dareento sida qof kuu jecelyahayna waa arrin kale. Sida aad u qarwaaqsato mas’uuliyadda kaa saaran qofka adiga ku jecelna, waa bu’da iyo baraaraha jaceylka.
Nagala soo xiriir: Himilonews.com.
Next: Xayiraad ay Yuhuuddu kusoo rogtay Falastiiniyiinta